Ogaden News Agency (ONA) – Wafti kasocda Dowlada Australia iyo Gudoomiyaha iyo Ku-xigeenka Jaaliyada S.Ogadenia Victoria oo kulmay iyo banaanbax jaaliyadda ay ka qayb-qaadatay
Wafti kasocda Dowlada Australia iyo Gudoomiyaha iyo Ku-xigeenka Jaaliyada S.Ogadenia Victoria oo kulmay iyo banaanbax jaaliyadda ay ka qayb-qaadatay
Posted by ONA Admin	/ January 29, 2013
Taarikhdu markey aheyd 25 Janaury 2013 Gudoomiyaha Jaaliyada Soomaalida Ogadenia ee Victoria Mudane Hikim iyo Ku xigeenkiisa Mudane Hassan Nuur ayaa kulan kula yeeshay xafiiska Jaaliyada Ogadenia ee Victoria wafti ka socday Dowlada Australia. Booqashada waftigan ayaa guul u aheed Jaaliyada Ogadenia ee Victoria oo ey ka dhaxeyso xirir caalami ah dowlada Australia.
Mudane Hikim ayaa waftiga oga mahadceliyey hirgilinta kulanka, una fahfaahiyeey waxqabadka Jaaliyada Soomaalida Ogadenia ee Victoria. Mudane Hikim ayaa ka xogwaramay shacabka Soomaalida Ogadenia ee kunool wadanka Australia gaar ahaan Victoria iyo sida ey oga muqdaan wadankooda Labaad, isagoo u sheegay waftiga in Jaaliyada ey u taagan tahay hormarka shacabka ka soo jeeda Ogadenia iyo hormarka wadankooda labaad Australia. Wuxuu kaloo gudoomiyaha shaaciyeey dhibaatooyinka iyo cuna-qabateenta ey Ethiopia ku heyso Soomaalida Ogadenia. Wuxuu ka codsaday in Dowlada Australia badhitaan ku sameyso Ethiopia iyo xadgudubka xaquuqul insaanka ey ku heyso shacabka Ogadenia. wuxuu Mudane Hikim iyo Mudane hassan ku sobandhigeen muqaalo aad looga qiirooda.
Waftiga dowlada ka socday ayaa ayaguna shaaciyeey in Jaaliyada Ogadenia ee Victoria ey yihiin jaaliyada qowmiyaadka kala duwan ee ku nool wadanka Australia aad ugu firfircoon wax qabadka dadkooda, dalkooda iyo dalkooda cusub Australia. Waxeey waftiga aad ugu faraxsanyahiin saaxibtimada ka dhaxeeysa dowlada Australia iyo Jaaliyada Ogadania ee Victoria, waxeeyna balanqaadeen in wadashaqeen iyo xirirka ey kasiiwadi doonaan. Kulankaan ayaa ku dhamaaday jawi fiican.
Waxaa kaloo ay jaaliyada S.Ogadenia ee Victoria ay ka qeybqaadatay banaabax looga soo horjeeday dowlada Sri Lanka oo lagu eedeeyeey in ey ka masuul ahaayeen xasuuqa dadka u dhashay Tamil. Mudaharadkan ayay ka soo qeyb galeen qowmiyadaha kala duwan ee ku nul magalada Melbourne, laguna hayo xasuuq, cunaqabateen iyo Gumeysi.
Mudane Abdulahi Bashir oo matalayey Jaaliyada Ogadenia ee Victoria iyo Ururka OYSU Melbourne ayaa halkaas ka soojeediyeey warbixin kooban. Abdulahi wuxuu dulmar Taarikhda Ogadenia iyo xasuuqa laguhayo Soomaalida Ogadenia. Wuxuna u mahadceliyeey Jaaliyada Sri Lanka shida sharafta leh eey u marti galiyeen Jaaliyada S/Ogadenia ee Victoria.
Waxeey Jaaliyada s/Ogadenia ku qeybiyen mudaharadka waraaqo ka hadlaya Tariikhda, dhaqanka iyo xasuuqa Soomaalida Ogadenia. Mudaharadkaa ayaasidii loogu talagalay ku soo dhamaaday.